Izithethi ze-Ikea, ukubaluleka kokuhlaziya iMac kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndisuka eMac | ndisuka kuMac
Kule veki sibuya emva kweentsuku ezininzi zekhefu leKrisimesi kwaye sibuya njengesiqhelo, sigcwele amandla kunye neendaba ezinxulumene nehlabathi le-Apple. Sifuna Siyavuyisana nani nonke kunyaka omtsha ukuba unathi yonke imihla, kwiwebhu, nakwiinethiwekhi zentlalo ezahlukeneyo kunye ne-Apple podcast esiyenzayo kunye neqela le-iPhone le-Actualidad.
Kwiveki yesibini yonyaka omtsha ka-2022, amahemuhemu kunye neendaba malunga neemveliso ze-Apple aziyeki, kwaye kukho iindaba ezimnandi esifuna ukwabelana ngazo nani nonke namhlanje, ngeCawa. Ngoko Masihambe nezinto eziphambili zale veki ku-I'm from Mac.
Siqala ngeendaba ze-Ikea kunye nentsha yayo Izithethi zethala leencwadi eziziqhelanisa ne-AirPlay 2. Kule meko kuhlaziyo olupheleleyo lwezithethi ezenza zibe enye yezona zikhetho ezilungileyo kweli candelo. Isandi esihle esivela kwisandla sikaSonos kunye noyilo lwe-Ikea.
Siyaqhubeka neendaba malunga nokubaluleka kokuba iMac yethu ihlaziywe kuhlobo lwamva nje olukhoyo. Kule meko ke iinguqulelo zamva nje zeMacOS Big Sur kunye neMacOS Monterey yasungulwa nguApple kwixesha elidlulileyo kwaye ngoku isisombululo kwingxaki enkulu yokhuseleko.
kule veki abanye Iinkonzo ze-Apple zayeka ukusebenza iiyure ezimbalwa. Kubonakala ngathi ingxaki ayizange ithathe ixesha elide ukuyisombulula kodwa njengoko sonke siyazi nge-Apple nakuphi na ukungaphumeleli kuyanyuswa kwaye oku kufikelele kumajelo ohlukeneyo njengoko kwenzekile kumaxesha angaphambili. Okwangoku yonke into ilungisiwe kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Ukugqiba sifuna ukwabelana ngeendaba malunga ne ingeniso iApple ivelisa kwiinkampani zangaphandle. Ezi nkampani ezifana ne-TSMC zifumana ezinye Inzuzo emangalisayo enkosi kwifemu yeCupertino kwaye ngokucacileyo kumsebenzi abawenzayo ngokwabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Izithethi ze-Ikea, ukubaluleka kokuhlaziya iMac kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ingcono ndisuka eMac
Uzihlela njani iifayile zePDF kwiMac